आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार नै किन गर्ने ?
शुक्रवार, मे 7, 2021
नोभेम्बर 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments आयुर्वेद, उपचार
आयुर्वेद विश्वकै प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो । आयुर्वेदको सिद्धान्त अनुसार शरीर, मन र आत्माको सन्तुलनमा मानव स्वास्थ्य निर्भर छ । त्यस्तै, शरीरमा हुने तीन दोष वात, पित्त र कफका कारण शारीरिक असन्तुलन पैदा हुन्छ । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रती जनविश्वास बढ्दै गएको छ ।
आयुर्वेद औषधि प्राकृतिक जडीबुटीबाट बन्ने गर्छ । खासगरी, बोटबिरुवा र खनिज आयुर्वेदिक औषधिका स्रोत हुन् । जो कच्चा पदार्थ संकलन, प्रशोधन गरेर वा सीधै प्रयोगमा ल्याइन्छ । आयुर्वेद औषधिमा केमिकलको प्रयोग गरिँदैन । त्यसैगरी, यसको सेवनबाट अन्य असर हुँदैन । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिबाट सम्मपुर्ण रोगको उपचार गरिन्छ । आजको लेखमा आयुर्वेदिक उपचार बारे जानकारी पस्कन लागेका छौं।
आयुर्वेदबाट उपचार गर्ने सकिने रोगहरू
१. आयुर्वेद उपचार पद्धतिबाट थुप्रै रोगहरू निको पार्न सकिन्छ । आयुर्वेदिकको अर्को जानकारी ब्याक्टेरियल, भाइरल र फन्गल इन्फेक्सन जस्ता सरुवा रोगको उपचार सम्भव छ । जडिबुटीजन्य औषधिबाट यस्ता रोग निको पार्न सकिन्छ ।
२. आयुर्वेद औषधिको प्रयोगले रोग निको हुन बढी समय लाग्छ भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ तर यो गलत हो । अनुपान भेद अनुसार आयुर्वेदिक औषधि सेवन गरेमा छोटो समयमै रोग निको हुन्छ ।
३. नसर्ने रोग अहिलेका विकराल समस्या हुन् । जीवनशैली र रहनसहनका कारण यस्ता रोग बल्झिने गर्छन् । तसर्थ, उपचारसँगै जीवनशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । जो आयुर्वेद उपचार पद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ ।
४. हरेक रोगका लागि विशेष औषधि बनाइएका हुन्छन् । रोगको अवस्था हेरेर चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि सेवन गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ ।
५. आर्युवेदिक औषधिको प्रयोगबाट जुनसुकै रोगको उपचार सम्भव छ । रोगको अवस्था हेरेर जडिबुटीको प्रयोग गरी रोगबाट बचाउन र बच्न सकिन्छ । भुइँअमला, त्रिफला, चिराइतो, कुटकी, तितेपाती, निम, सतावरी, बेल, पाँचऔलै, मधुमेहा, अश्वगन्धा आदि मुख्य जडिबुटी हुन् । यस्ता जडिबुटीको प्रशोधन गरेर विभिन्न रोगको औषधि बनाइने गरिन्छ ।
आयुर्वेदिक जडिबुटीबाट रोगको उपचार
आयुर्वेदिक औषधि र नेपालको अवस्था
आयुर्वेद वा एलोपैथिक उपचार बिधि कुन ठिक ?
वर्तमान समयमा आयुर्वेदिक औषधिको महत्व
आयुर्वेदिक औषधि र यसको रहस्य
← स्वास्थ्यको लागि सुन्तला खानुका फाइदाहरु
चम्सुरको साग खानुका फाइदाहरु →
पिसाव पोल्ने रोग र यसको उपचार
अप्रील 20, 2019 अप्रील 20, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
नङ फुल्नुका कारणहरु र उपचार
नोभेम्बर 29, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
घुर्ने समस्याको लक्षणहरू र यसको उपचार
जनवरी 21, 2019 जनवरी 24, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
उर्जा (Energy) भनेको के हो ?
नरिवल र यसको महत्व
सपनामा के के देख्यो भने धेरै अनिष्टका सङ्केतहरु हुन् ?
औषधीको रुपमा सिमालीको प्रयोग
कपालवाट नै थाहा हुन्छ महिलाको स्वभाव
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/adminscience/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757